भोलि विहान ५ बजेदेखि कर्फ्यु नै लगाउने निर्णय : घरको कम्पाउण्डमा समेत निस्कन नपाइने ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/भोलि विहान ५ बजेदेखि कर्फ्यु नै लगाउने निर्णय : घरको कम्पाउण्डमा समेत निस्कन नपाइने !
काठमाडौं,बारामा कोरोना संक्रमणको दर दिनानुदिन बढेपछि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
आम नागरिकको जीवनरक्षा तथा रोगका संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै जिल्ला कोभिड समन्वय समितीको बैठकले सोमबार बिहान ५ बजेदेखि लागु हुनेगरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निषेधाज्ञा अवधीमा औषधी पसललाई २४ सै घण्टा खोल्न अनुमती दिइएको छ भने अन्य अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरु खाद्यान्न, ग्यास, इन्धन, दुध डेरी, तरकारी पसलहरुसमेत बिहान ८ बजेभित्रै बन्द गरिसक्न निर्देशन गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जारी गरेको निषेधाज्ञा सम्बन्धी सुचनामा निषेधाज्ञा अवधीभर अत्यावश्यक काम बाहेक मानिसहरुलाई घर बाहिर वा घरको कम्पाउण्डमा समेत ननिस्कन आदेश दिइएको छ ।
तेस्तै, समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएपछि प्रदेश ५ मा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ। प्रदेशका तराईका जिल्लाहरुमा पान पसलेदेखि होटल व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तह तथा बैंकका कर्मचारीमा समेत कोरोना देखिएको छ। यस्तै, टोलटोलमा समेत भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्।
आइतबार मात्रै प्रदेशमा ८५ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा गरेर ५६ जनामा संक्रमण देखिएको थियाे। प्रदेश ५ को स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार आज सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा संक्रमित भेटिएका छन्। नेपाल आयल निगम, बुटवल उपमहानगरपालिका कर्मचारीसहित रुपन्देहीमा आज ३० जनामा भाइरस पुष्टि भएको हो ।
मान्छे मा’रेँ भन्दै मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय पुगे राजु, झो’लामा मा’न्छेको टा’उको देखेर प्रहरीको उड्यो होस
निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने
भोलिबाट सार्वजनिक यातायात संचालन हुने